Parami Energy Group of Companies – News
The government is now more than half way through its term and time is running out for it to make good on its promise to double Myanmar’s supply of electricity within the next two years.
But the government is not without backup plans to help it achieve its goals, one of which is replacing the use of electricity for household cooking with liquefied petroleum gas (LPG).
By the time its term is up in 2020, the government wants at least 1.5 million households across Myanmar to be cooking with LPG, which will free up more power to electrify the cities and industrial zones.
But while investments for the import, storage and distribution of LPG in Myanmar has risen over the past year, industry insiders say the government may not meet its deadline to make LPG available at the targeted scale.
One reason is the lack of infrastructure enabling LPG to be […]
May 10th, 2018|
The problem with the approach initially devised by the World Bank is that isolated areas and farmers cannot wait 15 years to have electricity. They needafaster solution and the only way to electrify rural areas in […]
The Ministry of Electricity and Energy (MOEE) is aiming to supply liquefied petroleum gas (LPG) to one million households by 2020, U Win Khine, Minister of the MOEE said atameeting with companies involved in the import, storage, distribution and marketing of LPG last week.
LPG can replace the use of electricity asafuel for household cooking, which will help to conserve power as well as the environment. This will be beneficial to residents in rural areas, who do not have access to electricity, the minister said.
After distributing LPG to 150,000 households in 2017, the next step is to reachamillion more by 2020. “The government and private sector will work together to expand the LPG industry in Myanmar so that it is able to supply the quantities needed,” U Win Khine said.
Last December, Parami Energy Services Company wonaK6.5 billion government tender involving the lease […]
March 30th, 2018|
The government is aiming to replace the use of electricity with Liquefied Petroleum Gas (LPG) asafuel for household cooking. If widely used, LPG can reduce the use of firewood as well as electricity when cooking, which will help to conserve power as well as the environment.
Last year, the Ministry of Electricity and Energy (MOEE) launchedaK6.5 billion tender involving the lease ofajetty, terminal and storage facility at the Thanlyin refinery in Yangon Region, for the purpose of importing, storing and distributing LPG in Myanmar.
A total of 21 companies sought tender applications but only nine submitted proposals. Of these, privately-owned Parami Energy Services Company ultimately beat oil company Puma Energy to win the tender in August last year.
It is the first time the government has leased out state-owned facilities underaPublic-Private Partnership for the import, storage and distribution of LPG in Myanmar. In the […]
အိမ်ထောင်စုတိုင်း ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဓာတ်ငွေ့ရည် (Liquified Petroleum Gas) တန်ချိန် ၁၈၀၀ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက သန်လျှင်မြို့နယ်၊ အမှတ် ၁ ရေနံချက်စက်ရုံ MLT ဆိပ်ကမ်းသို့ M.T.SENNA2သင်္ဘောဖြင့် ရောက်ရှိလာသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိမ်ထောင်စု အများစုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြင့် ချက်ပြုတ်လျှက်ရှိရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လျှော့ချအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် LPG ဓာတ်ငွေ့ရည်ကို စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ကြားမှုဖြင့် ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုက တစ်လလျှင် LPG ဓာတ်ငွေ့ရည်တန်ချိန် ၄၀၀၀ ပြည်ပမှတင်သွင်းပြီး ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက် ပထမအသုတ်အဖြစ် တန်ချိန် ၁၈၀၀ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
LPG ဓာတ်ငွေ့ရည် သုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် ထင်း၊ မီးသွေး အစားထိုးလောင်စာအဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် LPG ဓာတ်ငွေ့ရည်ကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းပြီး ဖြန့်ဖြူးပေးမ ည်ဖြစ်သည်။ LPG ဓာတ်ငွေ့ရည် သင်္ဘောပေါ်မှ သယ်ဆောင် သိုလှောင်ထားရှိမှုကို ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည်။ LPG ဓာတ်ငွေ့ရည်ကို တစ်နှစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တန်ချိန် ၁ သိန်းခန့်သာ သုံးစွဲကြကြောင်းသိရသည်။
အောင်သူရ (မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ, 25 Dec 2017)
ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်အကြား ပင်မ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကြီးများ ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲသည့် ကျေးရွာ ၄၂ ရွာသို့ Mini Grid ဖြင့် လျှပ်စစ်ပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်း ယခုလကုန်စတင်မည်
မကွေး နိုဝင်ဘာ ၁၃
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေစကြိုမြို့နယ် ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်အကြား ပင်မ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကြီးများ ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသည့် ကျေးရွာ ၄၂ ရွာသို့ Mini Grid ဖြင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မည့် စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ယခုနိုဝင်ဘာလကုန် စတင်မည်ဟု ပါရမီစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီမှ (C.S.R) တာဝန်ခံ ဦးအောင်မျိုးရှိန်ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ EDF ကုမ္ပဏီနှင့် ပါရမီစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် MoU လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း၊ EDF ကုမ္ပဏီသည် ယင်းစီမံကိန်းတွင် မပါဝင်တော့သောကြောင့် ပါရမီစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီနှင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တို့ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်က MoU အသစ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
” ဒီစီမံကိန်းက မြစ်ကြီးနှစ်သွယ်ကြား ရောက်နေပြီး National Grid တွေ မရောက်နိုင်တဲ့ ဒေသမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ လုပ်ငန်းအတွက်က ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကြီးပြီး အကျိုးအမြတ်နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျိုးအမြတ်ကို မျှော်ပြီးလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်တာပါ။ ခုလို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခုချိန်က အခါမဲ့မိုးတွေလဲ ရွာထားသေးတော့ ပစ္စည်းတွေသယ်ယူဖို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် စောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ အခု နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာပါ ”ဟု ဦးအောင်မျိုးရှိန်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းအတွက် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းစီမံကိန်းတွင် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဆိုလာစနစ်ကို အဓိကအသုံးပြုမည် ဖြစ်သော်လည်း ဒီဇယ်မီးစက်ကြီးများဖြင့်လည်း ပူးတွဲ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်စတင် ဖြန့်ဖြူးနိုင်ချိန်တွင် အများနှင့်ဆိုင်သည့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးရုံ စသည့် ရုံးဌာနများကို အခမဲ့ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အောင်သူငြိမ်း (Daily Eleven Newspaper: Nov 14, 2017)
YANGON, Myanmar and TOKYO, Oct. 23, 2017 (Antara/Kyodo JBN-AsiaNet) –
High-quality infrastructure will play an essential role in realizing economic growth and unlocking Myanmar’s true potential. The important role of quality infrastructure development and Japan’s indispensable role in Myanmar’s sustainable development were the main theme of discussion at the “Dialogue for Quality Infrastructure — Building Asia’s Future,” hosted by the Government of Japan.
While the event was attended by aboutahundred participants, active discussions were held on what kind of quality infrastructure is needed for Myanmar’s sustainable development and how Japan can play an important role.
Councilor Kazuyuki Takimi at the Embassy of Japan in Myanmar stated in his opening remarks on behalf of the Government of Japan that “quality infrastructure is the principle for developing countries to develop appropriate infrastructure within limited resources.” He also said, “We will continue to contribute to Myanmar’s infrastructure development with Japan’s wealth […]
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ သမိုင်းဝင် ဒီဇယ်ဆီများတင်ပို့ခြင်းကို အိန္ဒိယမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တမူးနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှတဆင့်၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့တွင် တရားဝင် စတင်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဇယ်ဆီများ ပထမဦးဆုံး တင်သွင်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆီဂါလံ (၁၀၀၀) ကိုလည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆီဂါလံ (၁၀၀၀) ကိုလည်းကောင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆီဂါလံ (၁၀၀၀) ကိုလည်းကောင်း လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပါရမီစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီများအုပ်စုမှ CEO နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
7:59 PM ET Thu,5Oct 2017
Ken Tun, Chief Executive Officer/Chairman, Parami Energy Group of Companies, explains how he is working to export refined oil products from India into northern Myanmar and potentially Bangladesh.
Parami Energy Service Co. will […]